Business सुझावहरू तपाईंको व्यवसायको लागि सफल भिडियो मार्केटि Strate रणनीति सिर्जना गर्न Martech Zone
T सुझावहरू तपाईंको व्यवसायको लागि सफल भिडियो मार्केटि Strate रणनीति सिर्जना गर्न
शुक्रवार, अक्टुबर 30, 2020 शुक्रवार, अक्टुबर 30, 2020 जेफ Galea
यो कुनै गोप्य कुरा छैन कि सामग्री मार्केटिंगमा भिडियोको प्रयोग बढ्दैछ। पछिल्ला केही वर्षहरूमा, अनलाइन भिडियो प्रयोगकर्ताहरूको लागि सबैभन्दा आकर्षक र सम्मोहक सामग्रीको रूपमा प्रमाणित भएको छ। भिडियो मिडिया मार्केटिंगको लागि सोशल मिडिया एक सबैभन्दा प्रभावकारी प्लेटफर्महरू मध्ये एक भएको छ, र यो तथ्यलाई हल्का रूपमा लिनुहुन्न। हामीसँग तपाईंसँग प्रभावकारी भिडियोहरू कसरी उत्पादन गर्ने भन्ने बारे केही आवश्यक सल्लाहहरू छन जुन तपाईंको दर्शकहरूको ध्यान खिच्न सकिन्छ ताकि तिनीहरूले अन्ततः कार्य गरे।
1. सीसा उत्पन्न गर्न भिडियोहरू सिर्जना गर्नुहोस्
तपाईं विपरीत, तपाईंको सम्भावित ग्राहकहरु दिन भर तपाईं जस्तै उत्पादनहरू वा सेवाहरूको बारेमा सोच्दै छैनन्। यसको सट्टामा, उनीहरूको आफ्नै चासो र एजेन्डाहरू छन्। सम्भावित ग्राहकहरूलाई रोक्न र नोटिस लिनको लागि, तपाईंले आफ्नो सामग्री उनीहरूलाई सम्बन्धित बनाउन आवश्यक छ।
मानिस कथाहरू मन पराउँछन् र माया गर्छन्। राम्रो कथाको स्पष्ट द्वन्द्व र सन्तोषजनक रिजोलुसन हुन्छ। यदि तपाईं वैध समस्या र एक प्रभावी समाधान भएको कहानी प्रयोग गरेर तपाईंको व्यापार फ्रेम गर्न सक्नुहुनेछ भने, व्यक्ति तपाईंको सन्देश पूरैमा सुन्न सक्ने छन् र तपाईंले के प्रस्ताव राख्नु पर्ने सम्झना गर्न सक्छन्।
2. तपाइँका भिडियोहरू फेला पार्नुहोस् र युट्युबमा राम्रो श्रेणी पाउनुहोस्
भिडियो अपलोड गर्न पर्याप्त छैन। अधिक दृश्यहरू प्राप्त गर्न र परिणामहरू उत्पन्न गर्न, तपाईंले YouTube लाई तपाईंको भिडियो के हो भनेर बताउनु आवश्यक छ र कुन लक्षित दर्शकहरू यसमा रुचि राख्छन्। भिडियो अप्टिमाइजेसनले तपाईंलाई भिडियोहरू वर्गीकृत गर्ने र तपाईंको सामग्री सही व्यक्तिहरूद्वारा फेला पार्ने अवसर दिन्छ। त्यसोभए यदि तपाइँ यूट्यूबबाट अधिक दृश्यहरू, सदस्यताहरू र ट्राफिक प्राप्त गर्न चाहानुहुन्छ, यी साधारण सुझावहरूको पालना गर्नुहोस्:
तपाईको कुञ्जीशब्दहरू पहिचान गर्नुहोस् र निश्चित गर्नुहोस् कि तपाईं उनीहरूको लागि तपाईंको युट्यूब सामग्री अप्टिमाइज गर्नुहुन्छ।
एक छोटो, चाखलाग्दो, र आकर्षक शीर्षक लेख्नुहोस् जुन तपाईंको भिडियो के हो भनेर संक्षिप्त वर्णन गर्दछ। शीर्षकले तपाइँका लक्षित कुञ्जी शब्दहरू समावेश गर्नुपर्दछ।
विस्तृत वर्णन लेख्नुहोस् जुन तपाईंको दर्शकहरूलाई तपाईंको भिडियो किन देख्न महत्त्वपूर्ण छ भनेर निश्चित गर्दछ र निश्चित गर्नुहोस् कि यसले तपाईंको कुञ्जी शब्दहरू समावेश गर्दछ। नोट गर्नुहोस् कि केवल पहिलो lines लाइनहरु Youtube मा क्लिक नगरीकन देखिने छन् अधिक देखाउनुहोस् लिंक, त्यसैले कुनै लिंक र कार्यहरूमा कल शीर्ष मा राख्नु पर्छ।
प्रासंगिक ट्याग र वर्गीकरण जोड्नुहोस्। यसले युट्यूबलाई तपाईंको भिडियोलाई सुझाव गरिएको भिडियोको रूपमा प्रदर्शन गर्न मद्दत गर्दछ जब प्रयोगकर्ताहरू समान भिडियोहरू हेरिरहेका हुन्छन्।
भिडियोको लागि कस्टम थम्बनेल थप्नुहोस् जुन तपाईंको ब्रान्डसँग सुसंगत छ ताकि तपाईंको लक्षित दर्शकहरूले सजिलै तपाईंको भिडियोहरू पहिचान गर्न सक्दछ।
उपशीर्षकहरू र बन्द क्याप्शनहरू समावेश गर्नुहोस्। यसले तपाईंको Youtube SEO बढावा दिन्छ र श्रोताको वातावरण र आवाज बिना नै दर्शकहरूलाई हेर्न सजिलो हुनेछ।
प्रतिक्रिया, टिप्पणी, र प्रश्नहरूलाई प्रोत्साहित गर्नुहोस्। यसले तपाईंको च्यानल अधिकार दिन्छ र तपाईंलाई समुदाय निर्माण गर्न मद्दत गर्दछ।
भिडियोको अन्त्यमा युट्यूबको नेटिभ अन्त स्क्रिनहरू थप्नुहोस्। यसले तपाइँको सामग्री, च्यानल, र तपाइँको वेबसाइटमा ट्राफिक ड्राइभ प्रचार गर्न मद्दत गर्दछ।
3. जागरूकता उत्पन्न गर्नुहोस् र यातायात ड्राइभ गर्नुहोस्
भिडियो टीज़रहरू दर्शकहरूको ध्यान खिच्न र जिज्ञासालाई प्रेरणा दिन डिजाइन गरिएको हो। सफल व्यक्तिहरूले के हुने हो त्यसको स्वाद मात्र प्रदान गर्छन् जसले गर्दा मानिसहरू थप जानकारी प्राप्त गर्न उत्सुक हुन्छन्। आजकल, सामाजिक मिडिया एक अपेक्षाकृत छोटो अवधिमा तपाइँको उत्पादनहरु वा सेवाहरु को बारे मा धेरै जानकारी प्राप्त गर्न छिटो र सजिलो तरीका प्रदान गर्दछ। भिडियो टिजरहरू साझा गर्नु तपाईंको लक्षित श्रोताको ध्यान खिच्न र गहन भिडियोहरू र जानकारीको लागि तपाईंको वेबसाइट भ्रमण गर्न आमन्त्रित गर्नको लागि प्रभावकारी तरीका हो। यसले तपाईंलाई तपाईंको सम्भावनाहरूलाई शिक्षित गर्न, अधिक योग्य लिडाहरू उत्पन्न गर्न र तपाईंको क्लोजिंग रेट बढाउन मद्दत गर्दछ।
4. मापन र नियन्त्रण
अब जब तपाईंले आफ्नो भिडियो सुरू गर्नुभयो, तपाईंले सही र सही तपाईंको भिडियो सामग्रीको प्रदर्शन मापन गर्न आवश्यक छ। र जबकि भिडियो हेराइहरू धेरै जसो बजारहरूले पहिले हेरेका हुन्छन्, त्यस्तै तपाईंको भिडियो कतिको राम्रो प्रदर्शन भइरहेको छ भन्ने कुरा गेज गर्नको लागि तिनीहरू उत्तम तरीका होइनन्।
यो तपाईको लक्ष्यको बारेमा हो!
भिडियो लक्ष्यहरू सेट गर्नु तपाईंको पहिलो चरण हुनुपर्छ। यसले तपाईलाई आवाश्यक डेटामा फोकस गर्न र अप्रासंगिक जानकारीमा समय बर्बाद गर्नबाट जोगिन आवश्यक निर्देशन दिनेछ। तपाइँ के प्राप्त गर्ने आशा गर्दै हुनुहुन्छ? यस अभियानका लागि तपाईंको प्राथमिक मार्केटिंग उद्देश्य के हो? के तपाइँ जागरूकता उत्पन्न गर्न, निर्णय लिन मद्दत गर्न, वा कार्य प्रेरित गर्न चाहानुहुन्छ?
यसको आधारमा, तपाईं पहिचान गर्न सक्नुहुनेछ कुन मेट्रिक्स प्रत्येक उद्देश्यमा लागू हुन्छ।
अब, हामी कुन मेट्रिकलाई तपाईं लक्ष्यहरूको लागि प्रयोग गर्न सक्दछौं हेरौं:
कुल नाटकहरू - यो सबै भन्दा साधारण तर सब भन्दा भ्रामक मेट्रिक हो। कुल नाटकहरूले तपाईंलाई क्यौं मानिसहरू देखाउँछन् जसले तपाईंको भिडियोमा प्ले बटन क्लिक गर्थे उनीहरूले भिडियो कति लामो समय सम्म हेरे पनि। जबकि यो मेट्रिक पहुँच मापन गर्न आदर्श हो, तपाईं निर्धारित गर्न सक्नुहुन्न कि तपाईंको भिडियो कत्ति प्रभावी र संलग्न छ।
प्ले दर - प्ले दर पृष्ठ विजिटरहरूको प्रतिशत हो जसले प्ले बटन क्लिक गरे र तपाईंको भिडियो हेर्न सुरू गरे। प्ले दर कम्तिमा नाटकहरू लिई र यसलाई भिडियो भारको संख्याबाट भाग गरेर गणना गरिन्छ। यसले तपाइँलाई निर्धारित गर्न मद्दत गर्दछ कि भिडियो सही ठाउँमा इम्बेड गरिएको छ र तपाइँको भिडियो थम्बनेल कती आकर्षक छ। यदि तपाईं कम प्ले दरहरू पाउँदै हुनुहुन्छ भने, तपाईंले आफ्नो भिडियोलाई अधिक प्रमुख स्थानमा राख्न, ईम्बेड गरिएको भिडियो ठूलो बनाउने, र थप आकर्षक थम्बनेल भएकोमा विचार गर्न सक्नुहुन्छ।
सगाई दर - सage्लग्नता देखाउँदछ तपाईंको कति धेरै भिडियो दर्शकहरूले हेरे, र प्रतिशतको रूपमा व्यक्त गरिएको छ। यो मुख्य सूचक हो जसले तपाईंलाई तपाईंको भिडियोहरू तपाईंको दर्शकहरूको लागि कत्ति सान्दर्भिक र चाखलाग्दो छ भनेर बताउँदछ र कुन दर्शकले तपाईंको दर्शकहरू चासो हराउन सुरु गर्दछ र कुन भाग छोड्दैछ भनेर तपाईंलाई मद्दत गर्दछ। यसले तपाईंलाई कल-टु-एक्शन बटनहरू र अन्य अन्तर्क्रियात्मक तत्त्वहरू भिडियोको बखत अधिक रणनीतिक रूपमा राख्न मद्दत गर्दछ।
सामाजिक साझेदारी - सामाजिक साझेदारीले तपाईंको भिडियो सामग्री सामाजिक मिडिया च्यानलहरूमा कसरी साझेदारी भइरहेको छ देखाउँदछ। सामग्री साझा गर्नाले नयाँ भिडियो दर्शकहरूमा पुग्छ, नयाँ दर्शकहरूमा पुग्छ, र तपाईंको दर्शकहरू तपाईंको सामग्री र ब्रान्डको बारेमा कत्ति उत्साहित छन् भनेर निर्धारण गर्न तपाईंलाई मद्दत गर्दछ।
रूपान्तरण दर - रूपान्तरण भिडियो हेराईको समयमा वा पछाडि गरिएको कार्यहरूको संख्या हो। यी सीटीएको र एनोटेसनहरू क्लिक गर्न, लिडाहरू उत्पन्न गर्न, र अधिक हुन सक्छ। यो मेट्रिक ट्र्याक गर्न अलि ट्रिकर हो, र तपाईंलाई सम्भावित भिडियो प्लेयर जस्तै विस्टीआ, विडियार्ड वा स्प्राउट भिडियोको आवश्यक पर्दछ घटनाहरूको विस्तृत विवरणको लागि। रूपान्तरण दर एक महत्त्वपूर्ण मेट्रिक हो जुन तपाईंको भिडियोहरूले उत्पन्न गरेको आरओआई मापन गर्न प्रयोग गर्दछ।
भिडियोले कसरी तपाईंको मार्केटिंग प्रयास जम्पस्टार्टमा मद्दत गर्न सक्छ भन्ने बारे थप जान्न चाहनुहुन्छ?
हामीलाई अब नि: शुल्क भिडियो मार्केटिंग परामर्शको लागि सम्पर्क गर्नुहोस्।
कृपया भ्रमण हाम्रो युट्यूब च्यानल अधिक भिडियो सल्लाहहरूको लागि जुन तपाईंको मार्केटि campaigns अभियानहरूलाई बढावा दिन निश्चित छन्।
टैग: room4 मीडियाकोठा4मिडियाभिडियो जागरूकताभिडियो रूपान्तरणभिडियो संलग्नताभिडियो कुञ्जी शब्दहरूभिडियो मार्केटिंगभिडियो विपणन रणनीतिभिडियो मेट्रिक्सभिडियो अनुकूलनभिडियो खेल दरभिडियो नाटकहरूभिडियो साझेदारीयूट्यूब रणनीति
जेफ गाल्याले कम्युन4मिडियाको स्थापना गरी मिशनको साथ संसारभरका व्यवसायहरुलाई सम्पर्क गर्न र भिडियो मार्केटिंग मार्फत उनीहरुको श्रोताको साथ अझ प्रभावकारी संवाद गर्न सहयोग पुर्‍यायो।
ग्रुपसोल्भर: मार्केट रिसर्चमा लीभरेज एआई र एनएलपी
T टेक कौशलहरू भोलीको डिजिटल मार्केटरहरूले आज मास्टर गर्न आवश्यक छ
डेभिड बी स्टीवर्ट
मई 14, 2021 मा 7: 24 एएम
सुझाव साझेदारी गर्न को लागी धन्यवाद। म अरूलाई बुझाउन यो प्रयोग गर्दैछु।